Semalt Inogovana Vital Tips Uye Zvirongwa Zvokurwisana WordPress Comment Spam
Zvakachengeteka kutaura kuti Akismet imwe yezvinyorwa zvakakurumbira uye zvinokosha zveShokoPress nzvimbo uye blog. Iwe haufaniri kuikanda iyo sezvo iyi plugin inouya isati yaiswa pane imwe nheyo ye WordPress. Asi iwe unofanirwa kugadzirisa zvirongwa zvaro maererano nezvinodiwa nemunhu. Akismet ndicho chivimbiso chinonyanya kuvimbwa kana zvasvika pakubvisa zvinyorwa zve spam. Iyo inonongedza mafungiro asina maturo uye inokudzivirira kubva pakudhinda zvinhu spam pa blog yako.
Chikamu chakanakisisa cheShokoPress ndechekuti ichagadzirisa zvigadziriswa zvifananidzo uye mapeji apo vashanyi vako vanogona kuona mifananidzo uye vachisiya mazwi maererano nezvido zvavo. Izvi zvinongokudzivirira kuti urege kugamuchira zvinyorwa zvepa spam sezvo vanhu chaivo vachabatana newebsite yako. Iwe unogona kudzivisa zvinyorwa pane zvese zvepa media, zvinyorwa uye zvibatanidzwa zvakakodzera. Kuvhara zvinyorwa izvi zvichaponesa WordPress yako nzvimbo kubva kune spammers uye hackers Source .